Taariikhda Musharaxa Madaxweyne ee Maamul-gobaleedka Jubbaland Gen. Cali Maxamed Xasan Looyaan (Cali Madoobe) | Saadaal Media
Taariikhda Musharaxa Madaxweyne ee Maamul-gobaleedka Jubbaland Gen. Cali Maxamed Xasan Looyaan (Cali Madoobe)
Jun 9, 2019 - jawaab
Musharaxa Madaxweyne ee Maamul-gobaleedka Jubbaland Cali Maxamed Xasan Looyaan (Cali Madoobe) waxaa uu sanadkii 1952dii ku dhashay magaalada Luuq Ganaane ee gobalka Gedo. Waxbarashada dugsiga hoose iyo kan dhexe iyo kan sare iyo waliba tan dugsi quraankaba waxaa uu ku dhamaystay magaalada Muqdisho. Sanadkii 1981 ayuu qaatay shahaadadiisi ugu horeysay ee jaamacadeed, isagoo ka qalin-jibiyay kuliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed.
Waxaa uu musharaxu xilal kala duwan oo sar-sare uu kasoo qabtay Dawladdii Kacaanka ahayd ee hoggaaminayay Allaha u naxariistee Gen. Maxamed Siyaad Barre, isagoo kasoo shaqeeyay qaybo kamid ah Amniga, sida Melateriga, Boliiska, iyo Nabadsugidda. Waxaa sidoo kale xilalkaas ad-adag ee uu soo qabtay bar-bar socday tababaro iyo waxbarasho kale oo dheeri ah uu ku soo maray dalalka ay ka midka yihiin:- Talyaaniga, Ruushka, Masar iyo Maraykanka, kuwaasoo uu dhamaanba ka soo qaatay shahaadooyin kala duwan oo waxgal ah.
Waxbarashada Musharax Gen.Cali Madoobe intaas oo kaliya kuma ekeyn ee wuxuu mar kale bilaabay Jaamacadda caanka Colarado State University, taasoo iyana uu ka qaatay shahaado dhinaca luqaddaha ah.
Burburkii Dawalddii dhexe ee kacaanka ahayd kadib, waxaa Gen. Looyaan uu kamid ahaa musuuliyiinta Soomaaliyeed ee isu taagey ama isu xilqaamay aadna ugu mushquulay sidii ay Soomaaliya markale uga aslaaxi lahayd nabedgelyo, dibuhishiisiin iyo Dawlad Soomaaliyeed oo lugaheeda ku taagan. Sidaa daraadeed ayuu Gen.Cali Madoobe waxaa uu sanadkii 2005tii noqday Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ee Dawladdii uu hurmuudka u ahaa Allaha u naxariistee Col. Cabdullaahi Yuusuf Axmed. waxaa ay dad badan isku raaceen in musuulkani uu isagu ahaa ninkii dhidibada markale u aasay dhismaha Ciidamada Boliiska Soomaaliyeed ee kal hore burburay, waxaana uu xilkaan hayay illaa sanadkii 2007dii, waxaana isla sanadkaas loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Tansaaniya.
Sanadkii 2009 ayay Dawladdii uu Madaxweynaha ka ahaa Mudane Sheekh Shariif Axmed markale waxaa ay Gen. Cali Madoobe u magacowday Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, taas oo muujinaysay sida aan marnaba isaga looga maarmi karin in ay Soomaaliya mar kale yeelato Boliis Soomaaliyeed oo awood iyo tayaba leh, waxaanna mar kale uu masuulku xilkaan hayay illaa sanadkii 2011kii.
Sanadihii 2013 illaa 2016 waxaa uu Musharux Cali Madoobe ahaa La-taliyaha dhinaca aminiga ah ee Dawladda Fedaraalka ah, gaar ahaana Xafiiska Ra’isulwasaaraha.
Haddaba wixii waqtigaa ka dambeeyay waxaa masuulku uu aad ugu mushquulsanaa arimaha dibuhishiisiinta iyo dhismaha maamul u sameynta deegaanada Jubbaland, waxaanna uu kamid yahay Guddiga farsamada ee loo qoondeeyay ama loo xilsaartay samaynta axdiga ku-meelgaarka ah iyo shuruucda iyo dhammaan qoraalada la xiriira maamul gobaleedka Jubbaland.
Si kastaba ha ahaatee Gen. Cali Maxamed Xasan Looyaan (Cali Madoobe) oo haatan ah musharax u taagan qabashada xilka Madaxweyne ee maamul-gobaleedka Jubbaland ayaa waxaa hubaal ah inuu yahay masuul ku sifoobay Daacadnimo, hawl-karnimo, dulqaad, aqoon, waayo-aragnimo Iwm. Sidaa awgeed ayaa haddii uu ku guuleysto doorashada waxaa laga filayaa inuu dhidabada u aaso maamul majaro hagaagsan oo wax wayn ka qabta dhammaan adeegyada aasaaska u ah nolasha bulshawaynta reer Jubbaland.
Daahir F. Afdheere